Muujinta isleeg ka 401 ilaa 401 Bogga 81 - Fadlan U Gudub Dhamaadka Si Aad U Aragto Natiijooyin Badan
4aad + 3O2 → 2aad2O3
dahab Oxygen dahab (iii) oksaydh
(waa) (xoog leh) (nau deen)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 4Au + 3O2 → 2Au2O3
Waa maxay xaaladda falcelinta Au (dahab) ee O2 (oxygen)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Au2O3 (dahab(iii) oksaydh)?
Kuleylka muunadda dahabka ah oo ku rid erlen ay ku jirto gaaska oksijiinta.
Dhacdada Au (dahab) ka dib waxay la falgashaa O2 (oxygen)
Dahabku wuxuu leeyahay hanti yarayn aad u daciif ah. Laguma qayilo hawada heerkulkasta.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 4Au + 3O2 → 2Au2O3
Su'aalaha la xidhiidha alaabta Au2O3 (dahab(iii) oxide)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Au2O3 (oxygen)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Au2O3 (dahab(iii) oxide) alaab ahaan?
Muujinta isleeg ka 401 ilaa 401 Page 81
Falcelinta Au (waa) la falgal O2 (oxi) soo saaro Au2O3 (Vàng Oxit)
Falcelinta soo saarta walaxda Au (vàng) (dahab)
Zn + 2Na [Au (CN)2] 2Au + Na2[Zn (CN)4] 3H2S + 2HAuCl4 → 2Au + 8HCl + 3S 3FESO4 + AuCl3 → Au + Fe2(NA4)3 + FeCl3
Falcelinta soo saarta walax Au2O3 (Vàng Oxit) (dahab (iii) oksaydh)
4aad + 3O2 → 2Au2O3